Ogaden News Agency (ONA) – Maamul cusub oo loo dooray OYSU/Norway
Maamul cusub oo loo dooray OYSU/Norway
Maanta oo ay taariikhdu tahay 19.01.2013 waxa ka dhacay xarunta jaaliyada Somalida Ogadenya ee Norway shir aad loo soo agaasimay oo ay soo qabanqaabiyeen OYSU/Norway. Shirkan oo ku saabsana xil wareejinta maamulkii hore ee OYSU ee soo hayeey xilka ururka dhalinyarad 2dii sano ee lasoo dhaafay iyo doorashada maamul cusub oo sii hyan doona xilka 2da sano ee soo socda.
Waxa shirka lagu soo bandhigay warbixino aad u qiimo badnaa oo ay soo kala jeediyeen masuuliyiin kala duwan kalana ahaa Xoghayihii hore ee OYSU halyeey Haaruun iyo xubno ka tirsan maamulka jaaliyada oo uu ka mid yahay Halgame C/Shakkuur Gacmodheere.
Kadib markii la dhagaystay warbixinada waxa xilka la wareegay guddigii doorashada oo ay doorkan gudoomiye u aheyd Halganto Maymuun Aaden halkaasna waxa lagu soo bandhigay musharaxii OYSU ee 2 sano ee soo socda.
Waxa cod aqlabiyad ah lagu doortay halgame Yuusuf Cabdi/Yuusuf yare ama dheere halkaasna uu ku aqbaliyad xilka loo doortay.
Waxa hadal dardaaran iyo hanbalyeeyn wadajira u soo jeediyay dhamaan gudoomiyaha cusub maamulkii hore ee OYSU iyo xoghayahoodi halgame Haaruun una balanqaaday wada shaqayn buuxa.
Mudane Yuusuf ayaa isna halkaas kasoo jeediyay khudabadiisi ugu horeeysay xoghaye ahaan una mahadceliyay xubnihii kasoo qaybgalay iyo maamulkii hore oo isaga laftigiisu uu ka mid ka ahaa
Waxa aad loogu rajo weynyahay Halgame Yuusuf oo khibrad dheer u leh ururka dhalinyrada in uu ka faaidaysan doono khibradiisa wax qabadka OYSU na kor u qaadi doona insha alaah isagoo soo magacaaban doono guddi la shaqeeya.